Tilmaamahaan ma leedahay? Ragga oo idil waa ay kaa helayaan kuna jeclaanayaan | Gaaloos.com
Home » galmada » Tilmaamahaan ma leedahay? Ragga oo idil waa ay kaa helayaan kuna jeclaanayaan
Tilmaamahaan ma leedahay? Ragga oo idil waa ay kaa helayaan kuna jeclaanayaan
Ragga ayaa tilmaamo gaar ah ka raadiya gabarta ay nolosoha la wadagaayaan , sidaa darteed Xiiso Online ayaa idin soo xushay dhowr arin oo amuurtaas la xariirta .
* Ninka ayaa aamisan in qalbigiisa uu ku jiro cunug yar : sidaa darteed waxaa gabaryaheey waajib kugu ah in arintaas ka faa`ideysato isla markaana ninkaada ula macaamisho in uu cunug yahay oo uu doonayo in uu helo farxad.
* Midda Aysan Jiirn Wax Ay Ku Qanceyso : kama helo noocaas aad ayuuna u neceb yahay haweeneyda dooneysa in ay wax waliba hesho iyadoo aysan dadaal badan arintaas kaga bixin, sidaas darteed ka fogoow arrintan haddii aad leedaheyna iska yareey oo iska baabi’i.
* Hogaaminta : ninka kama helo haweeneyda aan laheyn farsamooyin ay wax ku hogaamiso waayo waxa uu u arkaa ninka gabarta qeyb ka mid ah noloshiisa ee uu ku dhisi karo guri leh farxad ee gabaryaheey dadaal ku bixi in aad ninkaada wax kala hogaamiso guriga .
Title: Tilmaamahaan ma leedahay? Ragga oo idil waa ay kaa helayaan kuna jeclaanayaan